Special Agreement for Online Trading
၁။ အထွေထွေ စည်းကမ်းချက်များ
ဤ MSEC အွန်လိုင်း အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ခြင်း အထူးသဘောတူ ကတိစာချုပ်”(နောင်တွင် “စာချုပ်” ဟုခေါ်ဝေါ် သုံးစွဲသွားမည်) သည် မြန်မာငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ လဲလှယ်ရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီလီ မိတက်- Myanmar Securities Exchange Centre Co., Ltd. (နောင်တွင် “MSEC” ဟု ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲသွားမည်) နှင့် အွန်လိုင်း အရောင်းအဝယ် ဝန်ဆောင်မှု အသုံးပြုသူ (နောင်တွင် “ဝန်ဆောင်မှု အသုံးပြုသူ” ဟု ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲသွားမည်)တို့နှင့်သက်ဆိုင်သည့်အခွင့်အရေး နှင့်တာဝန်ဝတ္တရား အသီးသီးကို ရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြထားရန် ရည်ရွယ်ပါ သည်။
ဤစာချုပ်သည် မူလ အရောင်းအဝယ်သဘောတူစာချုပ်၏ နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်ပြီး၊ မူလစာချုပ်ကိုအစားထိုးခြင်း မဟုတ်ပါ။
ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူသည် ဤစာချုပ်အရ MSEC မှ တိကျစွာဖော်ပြ ထားပြီး ခွင့်ပြုထားသောအတိုင်းအတာအထိသာ အွန်လိုင်း အရောင်းအဝယ် ပြုလုပ်ခြင်းကို ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။
MSEC တွင် တာဝန်မရှိကြောင်း ကြိုတင် အသိပေးခြင်း
အောက်ဖော်ပြပါ အကြောင်းအရာ၊ ကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက် ၍ MSEC က တာဝန်ရှိမည်မဟုတ်ကြောင်း ငြင်းဆိုပါသည်။ ဤသို့ ကြိုတင်အသိပေး ငြင်းဆိုခြင်းသည် သက်ဆိုင်ရာ တည်ဆဲ ဥပဒေပြဌာန်းချက်များနှင့်အညီ အကျိုးသက်ရောက် မှု အပြည့်အဝ ရှိစေရမည် ဖြစ်ပါသည်။
(၁) ကွန်ရက်စနစ်တွင် အနှောင့်အယှက် ဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊ ဆက်သွယ်ရေးစနစ်၊ လျှပ်စီးပတ်လမ်း သို့မဟုတ် စက်ပစ္စည်း ကိရိယာများ ချို့ယွင်းချက် ဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊ လျှပ်စစ်မီး ပြတ်တောက်ခြင်း၊ အခြား ပြင်ပကန်ထရိုက်တာ များ၏ ပေါ့ဆမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော နှောင့်နှေးမှုများ အစရှိသည့် MSEC က တာဝန်မရှိသော အခြေအနေများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ဆုံးရှုံးမှုများ။
(၂) ဝန်ဆောင်မှု အသုံးပြုသူ၏ အမှာစာကြောင့် ပေါ်ပေါက်သော ဆုံးရှုံးမှု သို့မဟုတ် ၎င်း၏ Securities account အတွင်းသို့ Login ID နှင့် Password ကို ရိုက်နှိပ်ဝင်ရောက်ပြီး အွန်လိုင်းအရောင်းအဝယ် ပြုလုပ်သူ တို့က အမှာစာများပေးပို့ပြီး၊ အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာ သော ဆုံးရှုံးမှုများ။
(၃) ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူက အွန်လိုင်းဖြင့် အရောင်းအဝယ် ပြုလုပ်ရာ တွင် အသုံးပြုရသည့် မိမိ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို ပေါ့ဆစွာ ကိုင်တွယ် အသုံးပြုခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ဆုံးရှုံးမှုများ။
(၄) ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူက မိမိအသုံးပြုသော စက်ပစ္စည်းများ၏ လုံခြုံမှု ကို စိတ်ချယုံကြည်ရသော အခြေအနေအထိ စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိသော ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ဆုံးရှုံးမှုများ။
(၅) ဤစာချုပ်၏ အပိုင်း ၂ တွင် တိကျစွာဖော်ပြထားသော အရောင်း အဝယ် အမှာစာလက်ခံချိန်ကျော်လွန်ပြီးမှ တင်သွင်းသော အမှာစာကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ဆုံးရှုံးမှုများ။
(၆) ဤစာချုပ်၏ အပိုင်း ၂ နှင့် ၃ တွင် တိကျစွာ ဖော်ပြထားလျက်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူ ကိုယ်တိုင် မှားယွင်းတင်သွင်းမိသော အမှာစာများ ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ဆုံးရှုံးမှုများ။
(၇) ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူသည် ဤစာချုပ်တွင် တိကျစွာ ဖော်ပြထားသော တားမြစ်ချက်များကို ဖောက်ဖျက်သဖြင့် MSEC က အွန်လိုင်း အရောင်း အဝယ် အမှာစာများကို ငြင်းပယ်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသောဆုံးရှုံးမှု များ။
(၈) ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူသည် ဤစာချုပ်တွင် တိကျစွာ ဖော်ပြထားသော တားမြစ်ချက်များကို ဖောက်ဖျက်သဖြင့် MSEC က အွန်လိုင်းအရောင်း အဝယ် ဝန်ဆောင်မှုကိုရပ်ဆိုင်းထားခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ဆုံးရှုံးမှု များ။
(၉) ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူသည် ဤစာချုပ်နှင့် မူလ အရောင်းအဝယ် သဘောတူစာချုပ်ပါ စည်းကမ်းချက်များကို ဖောက်ဖျက်ပြီး အရောင်းအဝယ် ပြုလုပ်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ် လာသော ဆုံးရှုံးမှုများ။
ဤသဘောတူညီချက်နှင့်ဆက်စပ်ပတ်သက်၍ MSEC နှင့် လုပ်ငန်း ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူတို့အကြားတွင် အငြင်းပွားမှု တစ်စုံတစ်ရာပေါ် ပေါက်ပါက အဆိုပါအငြင်းပွားမှုကို နှစ်ဘက်ငြိမ်းချမ်းစွာ စေ့စပ်ညှိနှိုင်း ဖျန်ဖြေသော နည်းလမ်းဖြင့် ဦးစွာဖြေရှင်းကြမည်ဟု သဘောတူပါသည်။ အကယ်၍ အငြင်းပွားမှု စတင်ဖြစ်ပေါ်သည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း (၉၀) အတွင်း အထက်ပါ နည်းလမ်းအတိုင်း ဖြေရှင်း၍ မရနိုင်ပါက မြန်မာနိုင်ငံ၏ တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ စီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသော တရားရုံးတွင် တရားစွဲဆို ခွင့် ရှိပါသည်။
(၁) ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူအနေဖြင့် ဤသဘောတူစာချုပ် နှင့် မူလ အရောင်းအဝယ် သဘောတူစာချုပ်ပါ မည်သည့် စည်းကမ်းချက်ကိုမဆို ဖောက်ဖျက်ပါက MSEC က ကြိုတင်အကြောင်းကြားခြင်း မရှိဘဲ အမှာ စာများကို လက်ခံရန် ငြင်းပယ်ခြင်း သို့မဟုတ် အရောင်းအဝယ် မဖြစ်စေရန် ရပ်ဆိုင်းထားခြင်းများ ပြုလုပ်ပါမည်။
(၂) MSEC သည် တစ်ကြိမ်လျှင် ငွေကျပ် (၂၀) သန်းထက်ပိုသော မည် သည့် အရောင်းအဝယ်အမှာစာကိုမဆို ငြင်းပယ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူအနေဖြင့် အွန်လိုင်းအရောင်းအဝယ် အမှာစာများ မတင်သွင်းမီ ဤသဘောတူစာချုပ် အပိုင်း ၂ တွင် အတိအကျဖော်ပြ ထားသော အမှာစာတစ်ကြိမ်လျှင် အများဆုံး အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်နိုင် သည့် သတ်မှတ်ငွေပမာဏကို စစ်ဆေး၊ သိရှိပြီးဖြစ်ရန် တာဝန်ရှိသည်။
ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူ သို့မဟုတ် ၎င်းမှတဆင့် အွန်လိုင်းဖြင့် အရောင်း အဝယ်ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူအသုံးပြုသူမည်သူမဆို အောက်ဖော်ပြပါ လုပ် ဆောင်မှုများအတွက် အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုခွင့်မရှိပါ။
(၁) တည်ဆဲဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ အစိုးရအမိန့်နှင့် ဒီကရီများအရ တားမြစ် ထားသည့် လုပ်ဆောင်မှုများ။
(၂) အခြားသူတစ်ယောက်၏ အသုံးပြုမှုကို ချိုးဖောက်ခြင်း (သို့) ယိုယွင်း စေခြင်း သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုခု၊ အွန်လိုင်းအရောင်းအဝယ်ပြုလုပ် ရာတွင် အသုံးပြုသည့် စက်ပစ္စည်း၊ သတင်းအချက်အလက်၊ စာရင်း သို့မ ဟုတ် ကွန်ပျူတာကွန်ရက်တစ်ခုခုကို တရားမဝင်သောနည်းဖြင့် ဝင်ရောက် ရယူ အသုံးပြုခြင်း (သို့) နှောင့်ယှက်ခြင်း။
(၃) ဤစာပိုဒ်ပါ စည်းကမ်းချက်များကို ဖောက်ဖျက်ပါက အွန်လိုင်း အရောင်းအဝယ်ဝန်ဆောင်မှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုလည်းကောင်း၊ အားလုံး ကိုလည်းကောင်း ကြိုတင်အသိပေးခြင်း မပြုဘဲ ရပ်ဆိုင်းခြင်းခံရမည်။
MSEC သည် အွန်လိုင်း အရောင်းအဝယ် ဝန်ဆောင်မှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ကိုလည်းကောင်း၊ အားလုံးကိုလည်းကောင်း ကြိုတင်အသိပေးခြင်း မပြုဘဲ ဆီလျော်သော အကြောင်းများကြောင့် အချိန်မရွေး ရပ်ဆိုင်းနိုင်သည်။
အောက်ပါ ကိစ္စရပ်များပေါ်ပေါက်လာပါက ဤစာချုပ်ကို ပယ်ဖျက်နိုင် သည်။
(၁) ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူက အတွင်းသတင်းရရှိမှုများအပေါ် အခြေခံ၍ အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ပြီး အမြတ်ထုတ်ခြင်း၊ တည်ဆဲဥပဒေများ၊ နည်းဥပ ဒေများနှင့် စည်းကမ်းချက်များကို ချိုးဖောက်ခြင်း၊ MSEC ၏ အသိပေး တားမြစ်ချက်များကို မလိုက်နာခြင်း။
(၂) MSEC က ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူထံသို့ စာချုပ်ကို ပယ်ဖျက်ရန် တောင်းဆိုချက် တင်သွင်းခြင်း။
(၃) ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူက MSEC ထံသို့ စာချုပ်ကို ပယ်ဖျက်ရန် တောင်းဆိုချက် တင်သွင်းခြင်း။
(၁) ဤစာချုပ်ကို သက်ဆိုင်ရာ တည်ဆဲဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေများ အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း ပြဌာန်းချက် များတွင်အပြောင်းအလဲတစ်စုံတစ်ရာဖြစ်ပေါ်သည့်အချိန်တွင်လည်းကောင်း၊ MSEC က ပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်ရန် လိုအပ်သည်ဟုယူဆသည့် အချိန် တွင်လည်းကောင်း ပြင်ဆင်ခြင်းများ ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
(၂) ဤစာချုပ်ကို ပြင်ဆင်ပြီး သင့်လျော်သော အချိန်ကာလ အတွင်းတွင် ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူထံမှ ကန့်ကွက်ချက် မရှိပါက ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြု သူက ထိုပြင်ဆင်ပြောင်းလဲချက်များကိုသဘောတူပြီး ဖြစ်သည်ဟု သတ်မှတ် ကြပါမည်။
၂။ အွန်လိုင်းအရောင်းအဝယ် ဝန်ဆောင်မှု
MSEC က လက်ခံထားသော ဝန်ဆောင်မှု အသုံးပြုသူသာလျှင် အွန်လိုင်း အရောင်းအဝယ် ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုခွင့်ရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။
(၁) ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူသည် MSEC၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ် (https://login. msecmyanmar.com/) မှတစ်ဆင့် သို့မဟုတ်၊ MSEC Mobile Trading App မှတစ်ဆင့် အွန်လိုင်း အရောင်းအဝယ်အမှာစာများ တင်သွင်းနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
(၂) ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူမှ အင်တာနက်မှတစ်ဆင့် အရောင်းအဝယ်အမှာ စာများ တင်သွင်းရာတွင် ထိုသို့ အင်တာနက်မှ တင်သွင်းခြင်းကို MSEC က လက်ခံရရှိသည့် အချိန်ကိုသာ အမှာစာလက်ခံရရှိသည့် အချိန်အဖြစ် သတ် မှတ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
(၃) ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူသည် အစိုးရငွေတိုက်လက်မှတ်/စာချုပ်အတွက် အွန်လိုင်း အရောင်းအဝယ်အမှာစာ များကို MSEC၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ် (https://login. msecmyanmar.com/) မှတစ်ဆင့် သို့မဟုတ်၊ MSEC Mobile Trading App မှတစ်ဆင့် တင်သွင်းနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
(၄) ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူ အသုံးပြုသော ကွန်ပျူတာ၊ စမတ်ဖုန်း၊ အီလက်ထရောနစ် စက်ပစ္စည်းအမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ အသုံးပြုနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှု အမျိုးအစားများမှာ ကန့်သတ်ချက် ရှိနိုင်ပါသည်။
(၅) နေ့ချင်း အွန်လိုင်းအရောင်းအဝယ် အမှာစာများအတွက် အမှာစာ လက်ခံမည့်အချိန်မှာ နေ့စဉ် နံနက် ၈:ဝဝ နာရီ မှ အရောင်းအဝယ် ပြုလုပ် ပေးသည့်အချိန် တစ်ခုချင်းစီ (Matching time) မတိုင်မီ ၃ဝ စက္ကန့် အလို အထိလည်းကောင်း၊ နောက်နေ့အတွက် ကြိုတင်အမှာစာများကို ညနေ ၂:ဝဝ နာရီမှ ၈:ဝဝ နာရီအထိ လည်းကောင်း ဖြစ်ပါသည်။
(၆) အွန်လိုင်းအသုံးပြု၍ အမှာစာပေးပို့ပါက အမှာစာတစ်ခုစီ အတွက် အများဆုံး အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်နိုင်သည့် ကန့်သတ်ပမာဏမှာ ငွေကျပ် (၂၀) သန်းဖြစ်ပါသည်။(*)
* ဖုန်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ MSEC ရုံးခန်းသို့ လူကိုယ်တိုင်လာရောက် ၍သော်လည်းကောင်း အမှာစာများပေးပို့မည်ဆိုပါကပမာဏ ကန့်သတ်ချက် မရှိပါ။
* ဈေးကွက်အမှာစာနှင့် ပတ်သက်၍သက်ဆိုင်ရာ ရှယ်ယာ၏ သက်ဆိုင်ရာ နေ့တွင်ရှိနေသော အမြင့်ဆုံးရှယ်ယာစျေးနှုန်းပေါ်တွင် အခြေခံ၍ ဝန်ဆောင် မှု အသုံးပြုသူက အများဆုံးဝယ်ယူနိုင်သည့် ရှယ်ယာအရေအတွက်နှင့် လက်ရှိစျေးနှုန်းပေါ်တွင် အခြေခံသည့် ရောင်းချနိုင်သော ရှယ်ယာအရေ အတွက်ကို သတ်မှတ်/ တွက်ချက်မည်ဖြစ်သည်။
(၁) ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူသည် ၎င်း၏စကားဝှက်ကို ပုံမှန်ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်ခြင်းအစရှိသော သင့်လျော်ရာနည်းလမ်းများဖြင့် မိမိကိုယ်တိုင် ထိန်းသိမ်း၊ စီမံခန့်ခွဲရပါမည်။
(၂) ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူသည် ၎င်း၏စကားဝှက်ကို ကောင်းမွန်စွာ မထိန်းသိမ်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ဆုံးရှုံးမှုများအတွက် MSEC က တာဝန်မရှိပါ။
(၃) ID နှင့် Password ကို အလွဲသုံးစားပြုပြီး အသုံးပြုနေကြောင်း MSEC က ယုံကြည်ပါက MSEC က အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ခြင်းအား ကန့်သတ်ခြင်း (သို့မဟုတ်) ဆိုင်းငံ့ထားခြင်းတို့ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
(၄) အွန်လိုင်းအရောင်းအဝယ် ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုရန်အတွက် ကိုယ်ရေး ကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို ကောင်းမွန်စွာ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် လိုအပ်သော လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ စီမံဆောင်ရွက်ချက်များ ပြုလုပ်ထားရှိရန် အတွက် ဝန်ဆောင်မှု အသုံးပြုသူ၌သာ အချိန်ပြည့်တာဝန် ရှိပါသည်။
(၁) ရှယ်ယာ အရောင်းအဝယ်အတွက်အမှာစာ နှစ်မျိုးရှိပါသည်။
(က) ကန့်သတ်အမှာစာ – မိမိဝယ်လိုသော/ရောင်းလိုသော စျေးနှုန်းကို အတိအကျသတ်မှတ်ထားသော အမှာစာဖြစ်ပြီး၊ သတ်မှတ်သောစျေးနှုန်း ထက်မပိုသော စျေးနှုန်းဖြင့်မဝယ်ရန် သို့မဟုတ် သတ်မှတ်သော စျေးနှုန်း အောက် လျော့နည်းပါက မရောင်းရန် သတ်မှတ်ထားသော အမှာစာ ဖြစ်ပါ သည်။ သတ်မှတ်စျေးနှုန်းနှင့်မကိုက်ညီပါက အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ပေး မည် မဟုတ်ပါ။
(ခ) စျေးကွက်အမှာစာ – စျေးကွက်ပေါက်စျေးအတိုင်း အရောင်း အဝယ်ပြုလုပ်ရန် အမှာစာဖြစ်သောကြောင့် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်မြောက်ရန် လွယ်ကူပြီး၊ မမျှော်မှန်းထားသောစျေးနှုန်းဖြင့် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်မြောက် သွားနိုင်သည်။ စျေးကွက်အမှာစာများသည် ကန့်သတ်အမှာစာများထက် အရောင်းအဝယ် ဖြစ်နိုင်ချေ ပိုများသည်။
(၂) ရှယ်ယာအတွက်အမှာစာ ပေးပို့ခြင်း (သို့မဟုတ်) အမှာစာ ရုပ်သိမ်းခြင်းများကို MSEC ၏ Trading System ရှိ “Today Order Status” “ယနေ့အမှာစာများ အခြေအနေ” တွင် ဖော်ပြပေးထားသည့်အတိုင်း အတည်ပြုရမည် ဖြစ်ပါ သည်။
(၃) ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူက MSEC ထံသို့ ရှယ်ယာအဝယ်အမှာစာ တင်နိုင်သော ပမာဏသည် MSEC က သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏ အတွင်းသာ ဖြစ်ရပါ မည်။ ယင်းပမာဏသည် MSEC က သတ်မှတ် ထားသော နည်းစနစ်အရ တွက်ချက်ထားသော ပမာဏသာ ဖြစ်ရပါမည်။ အဝယ်အမှာစာ မတင်သွင်း မီ ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူမှ မိမိဝယ်လိုသော ငွေပမာဏအား MSEC ဘဏ် စာရင်းသို့ ထည့်သွင်းပေးရမည်။ ငွေသားဖြင့်ဝယ်ယူခြင်းကို လက်ခံမည် မဟုတ်ပါ။
(၄) ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူက MSEC သို့ ရှယ်ယာအရောင်းအမှာစာတင်နိုင် သော ပမာဏသည် ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူက MSEC ထံ၌ အပ်နှံထားသော (သို့မဟုတ်) MSEC က စီမံခန့်ခွဲပေးနေရသော ပမာဏထက် မကျော်လွန် စေရပါ။
(၅) အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်နိုင်သော ရှယ်ယာများကို ခွဲဝေရာ၌ ဝန်ဆောင်မှု အသုံးပြုသူက အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ရန် အဆိုပြုထားသော ရှယ်ယာအရေ အတွက် အားလုံးကို မရရှိခြင်းသော်လည်းကောင်း၊ အဆိုပြုထားသော ရှယ်ယာအရေအတွက်ထက် လျော့နည်းသော အရေအတွက်ကိုသာ ရရှိနိုင် ခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။
(၆) ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်ပြတ်တောက်ခြင်း၊ ကွန်ပျူတာစနစ် ချို့ယွင်း ခြင်း၊ လျှပ်စီးပတ်လမ်း သို့မဟုတ် စက်ပစ္စည်းချို့ယွင်းခြင်း အစရှိသော အကြောင်းရင်းများကြောင့် ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူထံမှ လက်ခံရရှိထား သော ရှယ်ယာအရောင်းအဝယ် အမှာစာများကို စတော့အိပ်ချိန်းသို့ မပို့နိုင်သည့်အချိန်တွင် MSEC က ထိုအမှာစာများကို ပယ်ဖျက်နိုင်သည်။
(၇) ရှယ်ယာအရောင်းအဝယ် အမှာစာ၏သက်တမ်းသည် ဝန်ဆောင်မှု အသုံးပြုသူ၏ ရွေးချယ်မှု အပေါ်မူတည်၍ အကျုံးဝင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
(က) တစ်နေ့အတွက်အမှာစာ – ၎င်းအမှာစာမှာ ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူ ကအမှာစာတင်သွင်းသော နေ့တစ်နေ့တည်းအတွက် သာအကျုံးဝင်ပါ သည်။
(ခ) သတ်မှတ်ရက်အထိအကျုံးဝင်မည့်အမှာစာ – ၎င်းအမှာစာမှာ ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူက သတ်မှတ်သောအမှာစာ သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့် နေ့ (သို့မဟုတ်) သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီ အရောင်းအဝယ်ဖြစ်မြောက်သည့်နေ့ အထိ အကျုံးဝင်ပါသည်။
(၈) ရှယ်ယာအရောင်းအဝယ် အမှာစာများကို ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲ၍မရပါ။ ပြင်ဆင်လိုပါကအရောင်းအဝယ်မဖြစ်မြောက်မီ ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူက မိမိတင်ထားသော အမှာစာ ကို ဦးစွာပယ်ဖျက်၍ ရှယ်ယာအရောင်းအဝယ် အမှာစာအသစ်တင်သွင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။ အကယ်၍ ရှယ်ယာ အရောင်းအဝယ်ဖြစ်မြောက်ပြီးပါက ဖြစ်ပေါ်လာသော ကိစ္စအားလုံးကို ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူမှ တာဝန်ယူရပါမည်။အရောင်းအဝယ်ဖြစ်မြောက်ပြီး နောက်တွင် ဝန်ဆောင်မှု အသုံးပြုသူက အမှာစာကို ပယ်ဖျက်၍ မရပါ။
MSEC သည် စတော့အိပ်ချိန်းမှ ရှယ်ယာအမှာစာအရောင်းအဝယ် ဖြစ်မြောက်ကြောင်း အတည်ပြုချက်ရရှိ သည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် ဝန်ဆောင်မှု အသုံးပြုသူသိရှိစေရန် အမှာစာများ၏အခြေအနေကို MSEC ၏ Trading System တွင် ဖော်ပြပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
(၁) ရှယ်ယာအရောင်းအဝယ်ဖြစ်မြောက်ပြီးနောက် ရှယ်ယာ/ငွေ စာရင်းရှင်း လင်း ခြင်းကို အရောင်းအဝယ်ဖြစ်မြောက်သည့်နေ့၏ နောက်ရုံးဖွင့်ရက် (၃) ရက် မြောက်နေ့တွင် ပြုလုပ်ပါမည်။ (ရုံးပိတ်ရက်များတွင်စာရင်း ရှင်းလင်း ခြင်း ကို ပြုလုပ်မည်မဟုတ်ပါ။) အရောင်းအဝယ်ဖြစ်မြောက်ပြီး ရရှိမည့် ငွေပမာဏကို ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူမှငွေထုတ်ယူရန် လျှောက်လွှာ တင်သွင်းပါက ထိုငွေပမာဏကို ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူ၏ဘဏ်စာရင်း ထဲသို့ အရောင်းအဝယ် ဖြစ်မြောက်ပြီး (၃) ရက်မြောက်နေ့တွင် ထည့်သွင်း ပေးမည်။ ငွေသား ထုတ်ယူ၍ မရပါ။
(၂) ရှယ်ယာအရောင်းအဝယ်ဖြစ်မြောက်ပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက် အရောင်း အဝယ် ပြုလုပ်နိုင်သည့် ပမာဏမှာ ချက်ချင်းသက်ရောက်မှုရှိမည် ဖြစ်သော ကြောင့် ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူအနေဖြင့် စာရင်းရှင်းလင်းသည့် နေ့မတိုင်မီ ပင် အဆို ပါ အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်လိုက်သော ပမာဏအတိုင်း အရောင်း အဝယ် အမှာစာများ တင်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
(၁) ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူထံမှ လက်ခံရရှိသော အရောင်းအဝယ်အမှာစာ များသည် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်မြောက်သွားပါက၊ ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူ သည် MSEC အား ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသော အရောင်းအဝယ်အကျိုး ဆောင်ခကို ပေးချေရပါမည်။
(၂) ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူသည် ၎င်း၏ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် စာရင်းလက်ကျန်အား အခြား ငွေချေးသက်သေခံကုမ္ပဏီတစ်ခုခုသို့ လွှဲပြောင်းမည်ဆိုပါက၊ ဝန်ဆောင်မှု အသုံးပြုသူသည် MSEC အား ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသော စာရင်းလွှဲပြောင်းဝန်ဆောင်ခကို ပေးချေရပါ မည်။
(၃) အစီရင်ခံစာ အစရှိသော စာရွက်စာတမ်းတို့အား ပေးပို့ပေးရမည်ဆိုပါ က ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူသည် MSEC အား ကြိုတင်သတ်မှတ်ထား သော ဝန်ဆောင်ခကို ပေးချေရပါ မည်။
(၄) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်စာရင်းမှ ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူထံသို့ ငွေလွှဲပြောင်းပေးရမည်ဆိုပါက ၊ ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူသည် MSEC အား ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသော ငွေလွှဲဝန်ဆောင်ခကို ပေးချေရပါမည်။
[ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများသို့ သတင်းအချက်အလက်များ ပေးပို့ ခြင်း]
(၁) MSEC သည် တည်ဆဲဥပဒေနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအရ သတ်မှတ် ထားသော အတိုင်းအတာအတွင်း၌ ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူ၏စာရင်းနှင့် ပတ်သက်သော သတင်းအချက်အလက်များအား စတော့အိပ်ချိန်းနှင့် ရှယ်ယာထုတ်ဝေသော ကုမ္ပဏီအစရှိသည့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများသို့ ပေးပို့ရ မည် ဖြစ်ပါသည်။
(၂) MSEC သည် ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူက ပေးပို့ထားသော ဘဏ်ငွေ စာရင်းကို စတော့အိပ်ချိန်းသို့ အကြောင်းကြားပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
MSEC သည် ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူ သိရှိစေရန် လိုအပ်သည့် အချိန်တွင် သတိပေးချက်များ၊ အသိပေးကြော်ငြာများကို MSEC ၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ် မှတစ်ဆင့် သို့မဟုတ်၊ MSEC Mobile Trading App မှတစ်ဆင့် ဖော်ပြ ကြေငြာသွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ ထိုသို့ကြော်ငြာပြီးသည့်အချိန်တွင် ဝန်ဆောင်မှု အသုံးပြုသူအနေဖြင့် အဆိုပါ သတိပေးချက်များ၊ အသိပေးကြော်ငြာများကို သိရှိပြီး ဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူရပါမည်။
Download Here for Special Agreement for Online Trading PDF
This MSEC Special Agreement For Online Trading (“Agreement) clarifies the respective rights and obligations of Myanmar Securities Exchange Centre Company Limited (hereinafter, the “MSEC”) and the Client for Online Trading.
This Agreement is to be seen asasupplementary to the Trading Agreement and notasubstitute for it.
The Client may use online trading service to the extent as expressly permitted by the MSEC under this Agreement.
The MSEC shall not be liable for any of the followings and these disclaimers will apply to the fullest extent permitted under applicable law:
(1) Damage caused by circumstances which MSEC is not responsible for, including but not limited to the network disturbances, system, circuit, or equipment failures, power failures, delays due to the negligence of outsourced contractors, etc.
(2) Damage due to any orders executed by the Client or those who access an online trading service through Client’s securities account, after confirming login ID and Password.
(3) Damage resulted from the Client’s negligent handling of personal information for using online trading.
(4) Damage resulted from inadequate security measures of the devices used by the Client
(5) Damage due to the order request which is out of Hours of Acceptance of Online Trading Orders which is expressly defined in Section II of this Agreement
(6) Damage due to the erroneous orders by the Clients which is expressly defined in Section II and III of this agreement.
(7) Damage due to the MSEC’s refusal of order request asaresult of the Client’s violation defined below
(8) Damage due to the MSEC’s suspension of online trading service asaresult of the Client’s violation defined below
(9) Damage due to the trade conducted by the Clients in violation of any terms and conditions of this Agreement and Trading Agreement
(1) The MSEC shall refuse order acceptance or suspend order execution without preliminary notice in case of the Client’s violations of any terms and conditions of this Agreement and Trading Agreement.
(2) The MSEC refuses any buy or sell orders exceeding MMK 20 million per transaction. It is, however, provided that the Client shall be responsible to check and acknowledge the Limited Online Trading Amount per Transaction which is expressly defined in Section II of this Agreement before an online trade is performed.
(1) inaway prohibited by law, regulation, governmental order or decree;
(2) inaway that could violate or impair anyone else’s use of it;
(3) Violation of the terms in this section may result in suspension of any part of or entire online trading service without prior notice.
The MSEC shall, at any time, stop the part of or entire online trading service without preliminary notice based on the reasonable grounds.
[Cancellation of Agreement]
This Agreement will be canceled if any of the following items
(1) If the Client commits insider trading; breach the laws, rules and any regulations; does not follow the notice by the MSEC.
(2) If the MSEC submitsarequest for Agreement cancellation to the Client.
(3) If the Client submitsarequest for Agreement cancellation to the MSEC.
(1) This Agreement will be changed if there have been changes, to the relevant laws and regulations or if deemed necessary by the MSEC.
(2) If there are no objections from the Client withinacertain period of time following the changes to the agreement, it will be deemed that the Client has consented to the changes.
II. Online Trading Service
[Online trading service]
The Client who is accepted by the MSEC can use the online trading service.
(1) The Client can place the orders via online through either the MSEC’s website (https://login.msecmyanmar.com/) or MSEC Mobile Trading App.
(2) The receipt of orders entered by the Client through the Internet shall be at the time the MSEC has received those transmissions.
(3) Buy and sell orders for bill/bond are not accepted via online through either the MSEC’s website (https://login.msecmyanmar.com/) or MSEC Mobile Trading App.
(4) Use of the service may be limited depending on the model of the computer or smartphone or electronic device used by the Client.
(5) Hours of Acceptance of Online Trading Orders are between 8:00am to approximately 30 seconds before each matching time for same business day and 2:00pm to 8:00pm for next business day.
(6) Limited Online Trading Amount of One Transaction is MMK 20 million. (*)
*No transaction limit for the order via phone or by visiting the MSEC’s office.
*When setting/calculating the maximum numbers of shares for market order, the Client can buy shares based on the upper limit and sell shares based on the current price of respective share price in respective day.
(1) The login password will be managed by the Client in an appropriate manner so that the Client takes steps such as regularly changing his/her password.
(2) The MSEC shall not be liable for any damages incurred asaresult of the Client not managing his/her login password appropriately.
(3) The MSEC shall restrict or suspend of trades if the MSEC believes that there isamisuse of ID and password.
(4) The Client will be, at all time, responsible for implementing and maintaining privacy protections and security measures to use online trading service.
III. Buy and sell orders
[Buy and sell order]
(1) There are two types of orders for shares.
A) Limited Order: an order withaspecific price, that is, either to buy at no more than or sell at no less than specific price. The order will not match atapoorer price.
B) Market order: it is easy to be executed because it will execute at the current price, it may happen at an unexpected price. Market orders have priority over limited order.
(2) The order or Cancel request for shares will be confirmed by MSEC by means of displaying the Today Order Status on MSEC’s Trading System.
(3) The amount of buy orders for shares that can be placed by the Client to the MSEC will be within the amount designated by the MSEC and this amount will be calculated in accordance with the method designated by the MSEC. Before placing buy order, Client must deposit the amount of buy orders to MSEC bank account by bank transfer. Cash is not acceptable to place buy orders.
(4) The quantity of sell orders for shares that can be placed by the Client to the MSEC will be within the number the MSEC has in custody or administers for the Client.
(5) For share available for subscription, there may be no allocation for the number of shares applied for or an allocated number of shares less than the number of shares applied for in some cases.
(6) When orders for shares received from the Client cannot be conveyed to the exchange due to factors such as network disturbances, system, circuit, or equipment failures, the MSEC may cancel those orders.
(7) The valid period of order for shares depends on Client’s choice. A)One day order : it will be valid on only the day the Client orders. B)Good till order, it will be valid until expiry date or until the order is filled before the expiry date.
(8) Order request for shares cannot be modified. To modify, the Client needs to cancel the order request and to place new order for shares if it is before execution. If the order for shares is executed, the Client has to take all the responsibilities. After execution of the order, the client cannot cancel it.
IV. Execution and Settlement
[Execution of orders]
The MSEC will share with the Client about the order status for shares in the MSEC’s Trading system immediately after the MSEC receives the confirmation for order execution from the exchange.
[Settlement of orders]
(1) After the order for shares is executed, shares/funds will be settled at T+3 Settlement occurs three business days after the date of execution. No settlement will be made on public holidays. The amount of funds will be transferred to the client’s designated bank accounts following withdrawal request. No cash transfer will be acceptable.
(2) Once the order for shares is executed, Buying/Selling power will be immediately effective, so the Client can place the order with the amount that he/she buys/sells before the settlement date.
(1) When buy and sell orders from the Client are executed, the MSEC will be paid the predetermined trade brokerage fee.
(2) When the client transfers securities balance to another securities company, the MSEC will be paidapredetermined transfer fee in some cases.
(3) When delivering documents such as reports, the MSEC will be paidapredetermined delivery fee in some cases.
(4) When making withdrawals from the securities account, the MSEC will be paidapredetermined remittance fee in some cases.
(1) The MSEC will provide client account information within the range stipulated by laws and regulations to external organizations including the exchange and issuers.
(2) The MSEC will notify the exchange of the bank account the client has notified the MSEC of.
When notice items and all items the Client should be contacted about have been posted on either the MSEC’s website or MSEC Mobile Trading App,
it shall be deemed that the Client has been notified.